Kusoo biir bulshada Paxful
Ma noqon karnaa saaxiibo?
Aan ku wada xariirno baraha bulshada anaga ayaana kaaga warami doona waxa ka socda Paxful iyo aduunyada lacagta oonleenka ah. Halkaan ayaad ka helaysaa bogaga rasmiga ah ee aan ku leenahay baraha bulshada—waxaana ku dari doonaa bogaan ciwaano kasta oo kale oon furano sidoo kale.
Ku xirnoow ciwaanka hoose, ama dhammaantood!
Aan ku wada sheekaysano Telegram
Waxaan abuurnay kanaallada Telegram oo gaar u ah wadan kasta oo aan ka shaqayno. Nagulasoo biir Telegram si aad noola sheekaysato aadna noogu sheegto fikradaha aad ka qabto Paxful iyo dadka kale ee lacagta oonleenka ah jecel ee bulshadaada.
Tababarada oonleenka ah ee Paxful
Ma doonaysaa inaad hesho xogihii ugu danbeeyay ee qaybaha barta Paxful iyo dhacdooyinka cusub ee aduunyada lacagta oonleenka ah? Tababaradeena oonleenka ah waa bad cilmi ood wax ka faaii'di karto.